Rakotoarivelo Mamy :Tsy hisy fifidianana eto raha tsy ampiharina amin’ny an-tsipiriany ny tondrozotra – MyDago.com aime Madagascar
Tsy nitsisy fitenenana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy nandritra ny lanonana fifampiarabana tratry ny asaramanitra teny Iavoloha androany maraina. Ny tondrozotra hoy izy no lalàna fototra ivoahana amin’izao krizy izao ary efa neken’ny mpiara-miombon’antoka ary efa lasa ho lalàna araka izany. Niara nahatadidy isika hoy ity olomboantendry ity fa taorian’ny fametrahana ny Praiministra tamin’ny toerany dia io tondrozotra io mihitsy no nambarany fa ho lehibe mpifehy azy. Iaraha nanaiky anefa hoy izy fa misy ireo andininy sasany efa notanterahina ka anisan’izany ny fananganana ireo adrim-panjakana. Na izany aza hoy ny filohan’ny Ct dia misy ny tsy fanajana ny andininy sasantsasany, izay tsy sasatra izahay hoy izy no mamerina izany dia ny andininy faha 16,17,20, izay niteraka resabe teto tamin’ny herintaona tahaka izao. Mbola aterinay hoy Rakotoarivelo Mamy, fa mbola be ireo gadra politika miaramila any am-ponja, tsy mbola tafaverina ireo sesi-tany politika sasany any ivelany. Tiana ny manamarika fa tsy hisy fifidianana handeha araka ny tokony ho izy eto Madagasikara raha tsy ampiharina haingana ny tondrozotra. Ankoatra izay dia tiana ny manamarika fa ny tondrozotra dia milaza fa ny ankolafy tsirairay no manolotra sy manala ireo olona ao amin’ny andrim-panjakana ao aminy. Tsy manam-pahefana amin’ny fanapahan-kevitry ny ankolafy hoy izy araka izany ny lehiben’ny andrim-panjakana. Tsy izay velively anefa no hita ankehitriny fa ilay tondrozotra ho nambara ho lehibeny no hitsakitsahana. Momba ny fandriampahalemana dia nambarany fa mahazo vahana ireo asa jiolahy sy fanafihana mitam-piadiana an-drenivohitra sy ambanivohitra. Ity tsy fandriampahalemana ity hoy Mamy dia misy mahavariana ihany tamin’ny taona 2012. Iarahantsika nandre fa tapitra ny operation Tandroka ary nolazaina fa nahafapo ny asa tany Atsimo. Mahagaga ihany anefa hoy izy ny mieritreritra fa ilay lehiben’ny dahalo izay noheverina ho rangory fototry ny afo dia tena tsy misy filazana mazava hoe aiza no misy azy, voasambotra sa tsia, maty sa velona. Lasa olo-malaza tamin’ny taona 2012 mihitsy izany Remenabila izany. Izahy eto amin’ny kongresin’ny tetezamita hoy izy dia manao antso avo amin’ ny mpanantanteraka mba hijery akaiky ary handray fepetra hentitra sy matotra fa tena mijaly ny vahoaka malagasy. Tsy mitsahatra misondrotra ny vidimpiainana. Ny fahefamividy anefa mitotongana. Raha ny voalazan’ny tondrozotra hoy izy dia ny fampandehanan-draharaha sy ny fampadehanana ny fifidianana no tena asan’ny fitodnrana tetezamita, nefa to avariana amin’ny tetikasa lavitr’ezaka. Azo ambara hoy Mamy fa tsy azo ihodivirana ny fotoam-pifidianana amin’ity 2013 ity izay rahateo ny fanirian’ny maro. Raha sanatria ka tsy ahavita izany isika noho ny antony izatsy na izaroa dia toa tsy azo eritreretina ny zavatra mety hiseho eto amin’ity firenena ity. Adidintsika mpanao politika tsirairay noho izany hoy izy nomametraka ambony ny soa ho an’ny firenena ary anajarantsika ny hisian’ny fandresehan-dahatra mba ho fifidianana vita tsara no antoky ny fankatoavana iraisam-pirenena. Tokony hajaina ny fanapahankevitra izay avoakan’ny fikambanana iraisam-pirenena fa izay no vahaolana ialana amin’izao krizy efa efataona izao. Tsy afaka hiolonolona i Madagasikara hoy Mamy fa tsy maintsy miaina amin’ny fikambanana iraisam-pirenena. Noho ny tsy fanajana ny zon’olombelona sy ny asa fanaovan-gazety dia tsy mbola tafaverina amin’ny AGOA isika izay nitondra asa eto amintsika. Araraotina izao hoy izy ampatsiahivana fa noho ny tsy fiverenanan amin’ny lalam-panorenana dia very ny Agoa fa tsy ny hetsiky ny ankolafy izatsy na izaroa izay voizina akory. Adidintsika mpano politika noho izany no manao izay hahatanteraka ny fifidiananan malalaka, sy eken’ny rehetra. Tsy misy fifidianana mangaraharaha sy malalaka anefa eto raha tsy voahaja ny zon’olombelona ary ny fahafahana maneho hevitra malalaka. Ilaina sokafana tsy misy atak’andro hoy Mamy ny haino amanjery tsy miankina nakatona.
Vakio eto : Kabary PCT Asaramanitra Iavoloha 2013 (1)
16 réflexions sur « Rakotoarivelo Mamy :Tsy hisy fifidianana eto raha tsy ampiharina amin’ny an-tsipiriany ny tondrozotra »
Izao ahay ka olona mahay mitondra Politika !
Tsy miantehatra amin’ny fanenjehana an’iza na iza, fa ny tena votoa-ati-kevitra no voalaza ary TSY MISY HANAMPIANA – TSY MISY HANALANA fa soritra mazava.
Misaotra anao Mamy Rakotoarivelo fa mbola misy ny olona azo ianteherana sy mahatoky na ho anay Mpitolona, na ho an’i Dada !!!
Misaotra anao ry Mamy Rakotoarivelo tena mety be ilay tifitra mivantana nataonao , fa indrisy anefa fa fantatrao ihany ny loham-poza , ny azy ihany no asesiny ,na efa fantam-poko rehetra aza fa diso sy jiolahy izy ireo, dia ny jadona sy fafy laingabe no mba hainy,
tsy kivy anefa isika ,fa efa nitolona ihany dia Tohizo ny Tolona ary hafanao fa sao isika mangatsiatsiaka izao , no araraotin´olona,
Tena manao ny politikan’i rajoelina marina ianao ry mamy! Lasa MPANOHITRA MANARA-PENITRA araka ny fifanarahana nisy teo aminareo roa tonta e!
Izany hoe manaiky antsakany sy an-davany ny maha ara-dalàna tanteraka an’izao fitondrana tetezamita izao ry mamy dia manohitra @ fomba manara-penitra (ara demokratika).
-ny tena demokrasia tompoko dia olom-boafidy fa tsy mpanongana na tendrena akory!
-Ny tena demokrasia tompoko dia misy fihainoana ny mpanohitra fa tsy sanatria fanaovana fitaovana azy hanesoana sy hamitahana ny be sy ny maro
-Ny tena demokrasia tompoko dia tsy misy gadra politika, tsy misy radio na télé akatona ary tsy misy fitsarana mitanila. Ka inona no hanaovana izao fitondrana izao ho ara-dalàna ?
Ary ny teninao ve ry Mamy mba najain’i rajoelina hatramin’izay nidiranareo tao izay? Toa sady voasiosioka sy tratry ny horakoraka no avy eo indray koa tratry ny valin-kabary loham-boto araka ny efa nampoizina!
« Dia ho fotoanan’ny filaminana anie ity taona 2013 ity hoy ianao! » Izany hoe hanohy ilay stratejia mpanohitra MANARA-PENITRA AN? Hinaonaona tahaka ny any anefitra tsy misy mpiraharaha ? Dia handrara ny tena mpitolona tsy hidina an-dalambe tsy hanaiky izao jadona misy izao koa ?
Soa fa efa mitsangana ny pro ravalo fa tsy hanaiky ho voafitaky ny fifanarahanareo sy rajoelina intsony ny mpitolona!
Ho ady @ rajoelina anie ity taona 2013 ity fa tsy hisy filaminana izany eto raha mbola io no manao ny loham-botony eto ampian’ireo GTS ireo!
Rajoelina tsy maintsy president ! Leo anareo teo aloa zahay: maloto fo !, marina ny tenin’ny Rajemison tsy manaiky resy zany Ravalo nefa ny nanalana azy teo dia tsy nety nataony diso tafaôtra.
DIA SAMY MITIA IZAY TIANY E ! mitovy aminy sy miaraka aminy tsara matoa tia azy ; rahirahiny inona izay vahoaka mahantra – aleo hoy izy irei ho faty any – KA DIA HO HITANTSIKA EO IZAY VOKANY E !
10 janvier 2013 à 10 h 34 min
MBOLA RESA-BE indray! jereo ny tao Centre Afrique,Mali,Congo…vao nisy korotana sy sakoroka be dia niolomay daholo ny REHETRA:OUA,ONU,UE,…handamina sy nandefa miaramila!!Ny eto amin’tsika raha mbola hitan’ireo fa TATY ny Malagasy ny FAHORIANA BE mahazo azy dia harirariran’ireo mpanao politika rehetra ireo!!!Betsaka amin’ireo Opportunistes ireo nomahazo tombony amin’izao situation izao!!!mandray karama amanaliny!!!mahazo protection personnelle sns ka tsy hiaran’ny vaky trano sy ny KERE!!!
RAMALAGASY MIFOHAZA AMIN’IZAY TORIMASO NANDRITRA NY 4 TAONA IZAY!!! tsy te hiteny aho hoe COMA nandritra ny 4taona!!!
MIDINA ENY ANDALAM-BE NO VAHAOLANA KA RAHA TSY HANAO NY MPANAO POLITIKA AOKA HATAONTSIKA TANORA AMIN’IZAY ANDAO FA AZA MATAHOTRA!!!
Miala tsiny amin’ny fihavànana RaMamy, fa ny nataonareo ireny no lazain-dry zalahy hoe MINIMUM SYNDICAL !
Tsy tanteraka atramin’izao ny fampiarana an’ilay tetezamita, kanefa ianareo milingilingy toy ny vinanto tsy mandre fosa, niaraka tamin’ireo mpanongana ireo.
Mba valin-dresaka nataon-dry zareo taminareo dia ny hoe : PARLE À MON CUL, MA TÊTE EST MALADE !!
Ary tena marin’izany satria olona marary saina no hiresahanareo !! Mba menatra !
Ary rehefa atao ny fandinihina, toa resaka sinemà be fotsiny sisa ity tantara ity, ary aza adino fa ianao no nanao sonia !
Raha mitohy izao dia mhamarininao mihintsy ilay teny hoe : « Izay miaraka amin’ny amboa dia, dia amboa dia », na hoe « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es » !
Eritrereto ihany io lazain’i Masyteny io.Tsy mila hoe mifandona amin’ny miaramila fa miova lalana raha sendra mibahana izy.
amiko alou na miaraka i Mamy sy Radomelina ,anazy zany fa au moin mba fanairana ny te -hatory iny kabary iny ,ary eto aho de manainga mavesatra sy mankato io lazain’i Masinteny io tsy fotoanan’ny mifampitsikera izao fa fotoanan’ny fandroahana mpangalatra sy demony.
Ny momba ny foza indray de tsy hitovy @ fomba fijerin’ny olona izy satria ny masony ohatran’ny antenne mi capte de directe ao @ lohany ,inona anefa no ao anatin’ny lohany ao (TAY no ao)
Ny olona mijery @ maso boribory de makany @ ati-doha de manao analyse
ENGA ANIE TSY HO TRATRY NY TAONA MIARAKA AMIN’ITY FITONDRANA FOZA ITY,KOA ALAO HERY RY NAMAKO O….
10 janvier 2013 à 17 h 44 min
TSY HO TRATRY NY TAONA 2014 MIARAKA AMIN’NY FOZA NO TIAKO TENENINA
Midi-Madagasikara mbola miaktona hatramy zao ry reto a !
Tsy tsaratsra kokoa ve mikatona daholo ny Gazety tsy saha manisyu fitenenana momban’izany ???!
Mbola nareo vo tafarina !!!
Mbola ela nareo vo tafarina !!!
Tokony tsyhisy aloha izany fifidianana izanty raha tsy tanterakany soridalana e. fa ny fanotaniana dia ny hoe , mandra-pahatongan’ny mai 2013 dia inona no hatao ? Kabary ? Fandraisana anjara ao @ fitondrana ? fivavahana ? hetsika fiaraha-miasa @ mpanohitra ? fidinananan’andalam-be. INONA ARY NO ATAO ?
Mikatona tsikelikely ireo serasera tsy manohina ny FAT. Nikatona ny TOP.MADA, nikatona ny collectif-gtt.org, nikatona ny midi.madagasikara, ary ilay netlog/tsimismboholahy aza toa tsy misikatra intsony.. Tadidio fa article telo no tsy tanteraka 16) hatsahatra ny fanenjenana ka mivoaka ireo gadra politika 17) mivoha sy malala ny aino aman-jery 20) mody malalaka ny sesitany.
Tokony hihetsika @ izay ny vahoaka, torak’izanyu koa ny mpanohitra, ary indriondra ny ankolafy Ravalomanana.
Greve generale, fialan’ny ankolafy ra8 ao @ fitondrana ary avy eo fidinana an-dalambe izay no vaha-olana. fa raha misy kosa vahaolana miaramila vao makika tsara , izany hoe potehina ireo miaramila foza.
Izao no izy ry LAZALAZAO a !
Mpanao politika « MANDANY RESAKA » fotsiny !!!
Précédent Article précédent : MEKTOUB EL OMAR CAMILLE : NY MANAMPAHAIZANA AVY ANY ANINDRANTANY NO MAMPIDIKIZO NY FIRENENA
Suivant Article suivant : LERIVA MANAHIRANA : TSY HO ELA DIA HO RAVA IO FITONDRANA IO